Yim Siam စံထိပျထား Thai Restaurant Myanmar | Latha | Yangon | yathar
ပင်လယ်စာစုံစုံလင်လင်နှင့် ရှုးရှုးရှဲရှဲစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ယိုးဒယား အ‌ထောင်းနဲ့ အသုပ် အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်တဲ့ ၂၁ လမ်းထဲက Yim Siam Thai Restaurant. အရမ်းကောင်းတဲ့ ထိုင်းစတိုင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာများကို လာရောက်မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်...
地址 No. 83, 21st, Latha, Yangon
種類 海鮮 , 拉麵 , 泰國北部菜 , 泰國東北菜 , 曼谷菜 , 泰國南部菜
No. 83, 21st, Latha, Yangon